एसिड प्रहारको अनुसन्धानमा प्रहरी नै कुहिरोको काग – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार
– काठमाडौंमा एसिडका ५ होलसेल पसल र तिनमा ९९ जना नियमित ग्राहक छन्।
– घटनास्थल आसपासमा भएका सिसिटिभी क्यामेरा हेरिएको छ।
– घटनाको बेला त्यो क्षेत्र आसपासबाट भएका १ सय ५० कल डिटेल हेरिएको छ।
– स्केच बनाएर ट्युसन सेन्टर आसपासका स्थानीयलाई देखाइएको छ।
– एसिड हान्ने मान्छेलाई पनि एसिड लागेको हुन सक्ने आशंकामा उपत्यकाका ८३ अस्पताल र मेडिकल कलेजमा प्रहरी पुगेको छ।
– एसिड त्यति धेरै कडा प्रकारको नभएको पनि पत्ता लगाएको छ।
तर अहिले सम्म एसिड किन र कसले हान्यो भन्नेकुराको कुनै सुइँको लागेको छैन। पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिंदै एआइजी शर्माले भने, ‘हामी सही मार्गमा हिँडने दिशातिर छौं।’ उनको उत्तर अनुसार प्रहरीले गरेको अनुसन्धान बाट कुनै ठोस उपलब्धि भने हात लागेको छैन । यसको कारण केलाउँदै उनले थपे:
– पीडित सीमा, संगिता र हेमु तीनै जनाले अलग-अलग किसिमको बयान दिएका छन्।
– हेमुले हुड लगाएको मानिसले एसिड हानेको भनेकी छन् भने, सीमाले उसको नाक लामो भएको बताएकी छन् र संगीताले टोपी लगाएको जनाएकी छन्।
– प्रहरीले पीडितहरूको उमेर, मनोविज्ञान र एसएलसी परीक्षाका नजिकै भएको कारणले उनीहरूलाई थप प्रश्न गर्न सकेको छैन रे ।
– घटनास्थल आसपासका स्थानीयहरूको उत्तर पनि फरक फरक भएको उनले बताएका छन्।
– घटनाबारे पीडितका परिवारले चासो नदिएको पनि प्रहरीले आरोप लगाएको छ ।
– बिहान सवा ६ बजे घटना भए पनि पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी नै गरेनन्।
– पीडितहरू अस्पतालमा पुगेपछि प्रहरीले नै अपराध महाशाखामा जानकारी गराउनु परेको थियो रे।
– पीडितका अभिभावकले अहिले पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गरेर प्रहरीको काम सजिलो नबनाएको प्रहरीको गुनासो छ ।
अभिभावकको कम चासो, पीडितको फरक-फरक बयान र घटनालाई कतिपयले अतिरञ्जित गर्न खोजेकाले पनि अनुसन्धान प्रभावित बनेको ती प्रहरी अधिकृतले बताए।
This entry was posted in Nepal and tagged Acid attack, Police. Bookmark the permalink.
← दुलही अभिनेत्री सुमिना घिमिरे साच्चिकै दुलही बनिन
जिरे खुर्सानि र भद्रगोल नयाँ बर्ष अगाबै प्रशारण शुरुहुने →